Quaint and Quirky Uyilo Lwangaphakathi Lwecafe - Imagazini yoyilo
Uyilo Lwangaphakathi Lwecafe
Uyilo Lwangaphakathi Lwecafe I-Quaint kunye ne-Quirky Dessert House yiprojekthi ebonisa i-vibe yeli xesha ngokuthinta indalo ebonakalisa ngokuchanekileyo ukuphatha okumnandi. Iqela lifuna ukwenza indawo eyahlukileyo ngokwenyani kwaye bajonga kwindlwane yentaka ukuze bakhuthaze. Umxholo ke uziswe ebomini ngokuqokelela kweepods ezihlala njengendawo ephambili yesithuba. Isakhiwo esisebenzayo kunye nemibala yazo zonke iipods zabelana ngokuncedisa ekwenzeni ubumbano oluhambelana kunye nomhlaba kunye ne-mezzanine phantsi njengoko zinika i-ambiance ukuba ichukumise ukubamba.
Igama leprojekthi : Quaint and Quirky, Igama labayili : Chaos Design Studio, Igama lomthengi : Bird Nest Secret.
Uyilo Lwangaphakathi Lwecafe Chaos Design Studio Quaint and Quirky